ZTE News: Daahfurka, Telefoonada, Kiniiniyada, Xidid iyo inbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
ZTE Blade A3v wuxuu ka muuqdaa Google Play Console oo leh Android 10
Taleefan cusub oo ZTE ah oo loo yaqaan Blade A3v ayaa soo muuqday waxaana loogu talagalay kuwa raadinaya terminal aasaasi ah.
ZTE Blade A3 Prime: Taleefan cusub oo aasaasi ah oo wata Android 10 oo kayar 100 euro
Shirkadda ZTE ayaa ku dhawaaqday Blade A3 Prime, oo ah aalad moobil aasaasi ah oo suuqa soo gasha oo loogu talagalay dadka isticmaala ee u baahan taleefannada casriga ah ee leh ismaamulka.
ZTE Axon 11 SE gabi ahaanba waa la dusiyay kahor intaan lasoo bandhigin
ZTE wuxuu maalmo yar gudahood ku soo bandhigi doonaa taleefan cusub oo wata magaca Axon 11 SE, terminal aan maanta si faahfaahsan u ogaanay.
ZTE Blade V 2020 gabi ahaanba waa la dusiyay ka hor inta aan laga bilaabin Yurub
ZTE Blade V 2020 gabi ahaanba waa la dusiyay. Astaamaheeda farsamo ee ugu muhiimsan iyo qeexitaankiisa, iyo waliba qiimaheeda, waa la dusiyay.
ZTE's Axon 11 5G Geekbench Tijaabiyay: Snapdragon 865 ayaa la xaqiijiyay
Barnaamijka tijaabada Geekbench wuxuu qaaday ZTE Axon 11 5G si uu ugu diiwaan geliyo keydkiisa keydka 'Snapdragon 865'.
ZTE's Axon 11 5G wuxuu helaa Shahaadada 3C kahor intaanu bilaaban usbuuca dambe
ZTE waxay gashay Axon 11 5G keydka macluumaadka ee wakaalada shahaadada ee 3C ee Shiinaha kahor intaan lasoo saarin maalmaha soo socda.
ZTE wuxuu soo bandhigayaa Axon 10s Pro 5G oo leh Snapdragon 865 iyo taageerada shabakadaha 5G
Shirkadda ZTE, ayaa dhacdo aan la sii diyaarin, waxay ku soo bandhigtay taleefankeeda casriga ah ee soo socda, kaasoo loogu magac daray Axon 10s Pro 5G.
ZTE Axon 10s Pro wuxuu imaan lahaa MWC 2020
ZTE Axon 10s Pro wuxuu noqon doonaa taleefanka xiga ee dhamaadka-sare leh ee nooca Shiinaha ee lagu soo bandhigi doono MWC 2020 si rasmi ah sida horay loogu dhawaaqay.
Xiaomi wuxuu ka sarreeyaa tirada 100 milyan oo taleefannada casriga ah laga iibiyo Hindiya
Maamulaha shirkadda Xiaomi Manu Kumar Jain ayaa shaaca ka qaaday in shirkaddu ay dhaaftay caqabadda 100 milyan oo taleefanno casri ah oo laga iibiyay Hindiya 5 sano gudahood.
Nubia Red Magic 3S waxay ku jebisaa AnTuTu dhibco bahalnimo ah
Nubia Red Magic 3S waxay la socotey gacanta AnTuTu waxayna duubtay dhibco heer sare ah oo heer sare ah oo ku jirta diiwaanka aasaasiga ah.
Nubia Red Magic 3s waxay horey u leedahay taariikh rasmi ah oo la sii daayo
Iyada oo loo marayo boostar rasmi ah, shirkadda ZTE ayaa shaaca ka qaaday in Nubia Red Magic 3S si rasmi ah looga dhigi doono Sebtember 5 suuqa Shiinaha.
Dhowr bilood ka hor, AnTuTu waxay ku taxday ZTE Axon 10 Pro 5G inay tahay taleefanka casriga ah ee ugu waxqabadka fiican thanks
Bisha Sebtember Nubia Red Magic 3S ayaa si rasmi ah loogu samayn doonaa qalabka ugu dambeeya ee loo yaqaan 'Qualcomm chipset'
Wax gaar ah ayaa soo ifbaxay si loo ogeysiiyo in Nubia Red Magic 3S uu noqon doono moobilka xiga ee la bilaabi doono bisha Sebtembar, iyo Snapdragon 855 Plus.
ZTE Axon 10 Pro 5G wuxuu helaa nooc cusub oo nooc ah 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo ROM ah
ZTE waxay soo bandhigeysaa nooc cusub oo ah Axon 10 Pro's RAM iyo meel lagu keydiyo gudaha oo leh isku xirnaanta 5G.
TENAA waxay daaha ka rogtay dhamaan astaamaha iyo qeexitaanada farsamo ee Nubia Z20, oo ah taleefan casri ah oo laba-shaashad leh oo tayo sare leh.
Tani waa sida ugu dhakhsaha badan ee 20x ee loo yaqaan 'ZTE Axon 10 Pro 5G' u shaqeeyo [+ Sawirro]
Waxaan soo bandhigeynaa tijaabooyinka kamaradaha ee ZTE Axon 20 Pro 10G 5x zoom isku dhafan oo ay soo saartay soo saaraha Shiinaha laftiisa.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan shatigan ZTE kaas oo aan ku arki karno taleefan leh shaashad laba-laab leh oo shaashad labaad ku leh dhabarka dambe.
Android Q beta wuxuu imanayaa ZTE Axon 10 Pro
ZTE Axon 10 Pro wuxuu aruurinayaa kaqeybgalayaasha si loo isticmaalo qalabka loo yaqaan 'Android Q beta' Tan ayaa lagu dhawaaqay shirkada.
Nubia Z20 ayaa sawirro ka qaadatay qorrax madoobaadka dalka Chile waxaana dhawaan laga bilaabi doonaa suuqa
Calanka xiga ee Nubia wuxuu sawirro ka qaaday qorrax madoobaadka Chile. Waxaan ka hadlaynaa Nubia Z20, mobilada dhowaan suuqa soo gali doona.
ZTE Axon 10 Pro 5G horeyba wuxuu u haystaa shahaadada CE ee lagu suuqgeynayo Yurub
ZTE Axon 10 Pro 5G horeyba wuxuu u haystaa shahaadada CE si loogu suuq geeyo Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA).
ZTE Blade A5 2019: Nooca heerarka cusub ee soo-gelinta sumadda
Raadi wax walba oo ku saabsan ZTE Blade A5 2019, casriga casriga cusub ee laga soo iibsado nooca Shiinaha ee horay loogu iibiyay suuqyada qaarkood.
ZTE Axon 10 Pro 5G ayaa la heli doonaa iib ahaan qeybtaan koowaad ee sanadka
ZTE ma siinin taariikhda saxda ah ee daahfurka Axon 10 Pro 5G ee Yurub. Weli, waxaan hadda haynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan helitaankeeda gobolka.
Nubia Red Magic Mars waxay noqon doontaa mid rasmi ah oo caalami ah laga bilaabo Janaayo 31
Nubia waxay isu diyaarineysaa inay Red Magic Mars ka dhigto mid caalami ah. Lafteeda, waxaa laga heli doonaa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika laga bilaabo 31-ka Janaayo ee soo socota.
Naqshaddii ugu dambeysay ee ZTE Axon 9 Pro horay ayaa loo muujiyay. Soo ogow naqshadda yeelan doonta taleefanka cusub ee nooca Shiinaha ee yimaada bishaan.
ZTE Blade V8, falanqeyn iyo ra'yi
Falanqaynta Isbaanishka ee ZTE Blade V8, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo u taagan tayada codkeeda iyo kamaradeeda u oggolaaneysa in sawirro lagu qaado 3D
ZTE Axon Mini: falanqeyn iyo ra'yi
Falanqaynta fiidiyowga oo dhammeystiran ee ZTE Axon Mini, aalad kaa yaabin doonta tayada shaashadeeda, qalab awood badan iyo kamarad dhameystiran
Faahfaahinta ZTE Axon 7 mini oo leh shaashadda 5,2,, 32 GB oo ah xusuusta gudaha iyo Snapdragon 617 chip ayaa la sifeeyey
Mini-ga ZTE Axon 7 mini ayaa la sifeeyay qeexitaankiisa waxaana loo soo bandhigayaa inuu yahay walaalka ka yar ee soo saaraha Shiinaha.
Soosaarka caalamiga ah ee 'ZTE Axon 7' ​​wuxuu bilaabmayaa inuu Yurub gaaro marka hore
ZTE Axon 7 waxaa horey looga sii hayn karaa Amazon dalal badan oo yurub ah marka laga hadlayo bilawga caalamiga ah ee terminalkan soo saaraha Shiinaha
ZTE wuxuu ku dhawaaqay Nubia Z11 Max oo leh shaashad 6 ', Snapdragon 652 chip iyo 4GB RAM
ZTE Nubia Z11 Max waa taleefan casri ah oo xiiso leh oo leh shaashad 6 "ah, 4GB oo RAM ah iyo Snapdragon 652 chip oo ah qiimo dhan 304 doolar si loo beddelo.
ZTE Axon Elite, falanqeyn iyo ra'yi
Falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan ZTE Axon Elite, dhamaadka-sare ee cusub ee ka socota ZTE ee timaada Spain oo cagta marineysa si ay boos uga hesho suuqa-dhamaadka sare.
ZTE Axon 2 wuxuu kudhowaad yahay in lagu dhawaaqo Snapdragon 820 chip iyo 20MP camera gadaal ah
ZTE Axon 2 waxaa lagu soo bandhigi doonaa ka mid noqoshada qalabka loo yaqaan 'chip' kaas oo noqday kan ugu wada jecel: Qualcomm's Snapdragon 820.
ZTE nubia Z11 mini ayaa lagu shaaciyey 5 display 1080p muuqaal, kamarad 16MP iyo dareeraha sawirka faraha
ZTE ayaa ku dhawaaqday Nubia Z11 mini oo leh shaashad 5-inji ah iyo dareeraha faraha ee mobilada gaadha heerka sarrifka ee 231 doolar.
ZTE wuxuu dhaafayaa caqabada 100 milyan oo qalab oo la iibiyay
Shirkadda ZTE ayaa hadda ku dhawaaqday inay dhaaftay caqabadda 100 milyan oo taleefanno ah oo la iibiyay sanadkii 2015-kii
ZTE Axon Mini wuxuu ku imaan doonaa Spain qiimo jaban: 389 euro
ZTE ayaa hada shaacisay in ZTE Axon Mini uu imaan doono Spain dhamaan bisha Febraayo qiime aad u qurux badan: 389 euro
ZTE wuxuu ku dhawaaqay Nubia Prague S oo leh Snapdragon 615 iyo 5,2 display Muuqaal Full HD ah
ZTE wuxuu ku dhawaaqay Nubia Prague S oo leh shaashad 5,2 ah, 3GB oo RAM ah iyo qalabka wax lagu xiro ee iris ka mid ah astaamaha kale ee xiisaha u leh taleefanka gacanta.
ZTE Nubia X8 waa la sifeeyey
Soo saaraha Shiinaha ee ZTE ayaa gacanta ku haya aalad cusub oo imaan doonta sanadkan. Waxaan ka hadleynaa ZTE Nubia X8.
Sawirro iyo qeexitaanno ah Nubia X8 ZTE oo wata Snapdragon 820 chip ayaa muuqda
Waxaan ka ogaan doonnaa wax badan oo ku saabsan Nubia X8, hubaal, Janaayo 18, oo ah marka ZTE ay leedahay dhacdo la qorsheeyay. Sida aan u degno sawiradaada xaday
ZTE Blade A1 wuxuu hadda si rasmi ah ugu shaqeeyaa dareeraha faraha wax ka yar 100 doolar
In ka yar $ 100 oo leh ZTE Blade A1 waxaad kuheli kartaa dareeraha faraha, laba SIM, 4G, batari 2.800mAh, shaashad 5-inji ah iyo 2GB RAM
ZTE wuxuu soo bandhigayaa seddex terminaal oo cusub: ZTE Blade X9, X5 iyo X3
ZTE waxay soo bandhigtay sedex terminal oo cusub oo kuwa dhexe ah. Iyagu waa ZTE Blade X9, ZTE Blade X5 iyo ZTE Blade 3.
ZTE wuxuu ku dhawaaqayaa cusboonaysiinta xarunteeda dhexe Blade X9, X5 iyo X3
Waxaa jira seddex taleefan oo casri ah oo ka socda ZTE si ay u galaan suuqa galbeedka: Blade X3, X5 iyo X9. Saddex mobiles oo leh astaamo gaar ah oo xiiso leh
ZTE C2016, terminaal dhexdhexaad ah sanadka dambe
Soo saaraha Shiinaha ee ZTE wuxuu leeyahay taleefan cusub oo heer dhexe ah oo la sii deyn doono sanadka soo socda ee 2016, waa ZTE C2016.
ZTE Blade S7, ayaa soo bandhigtay taleefanka casriga ah ee dhex dhexaadka ah oo leh qiimo jaban
ZTE ayaa hadda soo bandhigtay ZTE Blade S7, oo ah taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah kaas oo u muuqda mid soo gabagabeeyay tayada iyo qiimaha macquulka ah.
ZTE waxay ku eedeeysaa Huawei inay masaxday naqshadeynta Grand S ee Nexus 6P
ZTE waxay ku eedeyneysaa Huaei inuu nuqul ka sameystay naqshadda ZTE Grand S ee Nexus 6P, gaar ahaan sababta oo ah xariijimaha madow ee kaamerada.
ZTE wuxuu ka furayaa dukaankiisa khadka tooska ah ee Spain Isbaanishka macaamiisha macaamiisha
Laga bilaabo bisha soo socota ee Oktoobar 1, ZTE wuxuu ka furayaa dukaanka internetka Spain oo bixiya 24-saac VAT iyo rar bilaash ah
ZTE wuxuu ku soo bandhigayaa sadex casriga casriga ah IFA 2014
ZTE waxay noo soo bandhigtay moodeladeeda casriga ah IFA 2014. Moodooyinkeeda, ZTE Blade VEC 3G iyo 4G iyo ZTE Kiss 3 MAX, moodooyinka ugu dhaqaalaha badan.
ZTE wuxuu soo bandhigayaa Nubia Z7, Z7 Max iyo Z7 Mini
Waxay ka taagan tahay seddexda in calanka Nubia Z7 uu yahay midka kaliya ee leh kamarad leh xasilinta muuqaalka muuqaalka
Liin dhanaanta waxay u soo bandhigtaa Orange Rono shaashad 5 ″ HD IPS ah, Snapdragon 400 Quad-core chip iyo Android KitKat oo ah € 179
Haddii aad raadineyso telefoon dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo leh astaamo muhiim ah oo qiimo aad u wanaagsan leh, Orange Rono ayaa ah musharraxa ugu fiican.